Window XP အတွက် Theme များ - Page3- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Window XP အတွက် Theme များ
ပြန်စာ - Window XP အတွက် Theme များ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, tartarlay18, zo
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 11 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Window XP အတွက် ပန်ဒါဝက်ဝံပုံစံ Themes
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ tartarlay18 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by tartarlay18
13-10-2009, 05:52 PM
အကိုအမတို့ သိပြီးသားလားတော့ မသိဘူးခင်ဗျ။ သိပြီးသား ဆိုရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။ မသိသေးတဲ့ လူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
window xp service pack3ကိုသုံးတဲ့ အခါမှာ တခါတလေ themes တွေကိုပြောင်းလို့မရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အခု ကိုယ်တိုင်ကြုံဘူးလို့ပါ။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင် ဒီအောက်မှာ ပေးထားတဲ့ patcher လေးကို သုံးလိုက်ပါ။ file ကို download လုပ်ပြီးရင် rar ထဲမှာပါတဲ့ exe ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင် patch ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ပြီးရင်တော့ ကွန်ပြူတာကို restart ချပေးလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
Last edited by ကျော်ထက်ချိန်; 13-10-2009 at 05:53 PM..
သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, minthike, zo
18-11-2009, 08:37 PM
install လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ folder ထဲမှာ ဖိုင်တစ်ခုပဲ ပါပါတယ်။ အဲဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပီး restart ချလိုက်ရင် ရပါပီ။
Last edited by သက်နိုင်; 18-11-2009 at 08:39 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ သက်နိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, မောင်သံသရာ, minthike, zo
16-12-2009, 04:37 AM
Seven Transformation Pack 4.0 (Convert Your XP to Windows 7)
ကဲ့ Windows7ကိုသုံးဖို့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ ရှိပြီး၊ XP ကို Windows7လို စတိုလ်လေး ပြောင်းသုံးချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းသွားလိုက်ပါဦး
Last edited by Myo Min Zaw; 26-12-2009 at 02:06 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဆန်းမောင်, ဇာနည်မောင်, ဒဿဂီရိ, မိုးပြာပြာ, ကျော်ထက်ချိန်, မောင်သံသရာ, aunggyi, james249, minthike, phyothuhein, thurein, yewinnaung, zo
25-12-2009, 11:08 PM
တည်နေရာ: အလုပ်နဲ့ မန္တလေး&
ပြန်စာ - Themes 100 windows 7
အစ်ကိုဖြစ်နိုင်ရင် ifile ကနေပြန်တင်ပေးပါလား အခု mediafire ကနေ မယူတတ်တော့ဘူး အသစ်ပြောင်းတာတဲ့ ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး ဘယ်နားမှာနှိပ်ပြီးဒေါင်းရမှာမှန်းလည်းမသိဘူး ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ခြားနေရာကနေ တင်ပေးပါလား ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး ဟီးးးးးးးးးးးးးး
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မောင်လူလှ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မောင်လူလှ
25-12-2009, 11:38 PM
တည်နေရာ: ယု ရင်ခွင်
ပို့စ် 747 ခုအတွက် 3,229 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အစ်ကိုဖြစ်နိုင်ရင် ifile ကနေပြန်တင်ပေးပါလား
ifile နဲ့ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်.
Themes 100 windows7နဲ့ Seven Transformation Pack 4.0 (Convert Your XP to Windows 7) က
ဒေါင်းလော့လင့်နှစ်ခုက အတူတူ ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ့.
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ဒဿဂီရိ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ကျော်ထက်ချိန်, minthike, Myo Min Zaw, zo
Find More Posts by ဒဿဂီရိ
26-12-2009, 03:16 AM
Originally Posted by ဒဿဂီရိ
အကို မူရင်းပို့စ်မှာ အခုနောက်ထပ် ရှာတွေ့တာလေးတွေ နဲ့ ပေါင်းပြီး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပြီကွ
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, မောင်သံသရာ, chitnyimalay, minthike, yewinnaung, zo
27-12-2009, 01:32 AM
ကျေးဇူးပါပဲအစ်ကို တို့ အခုလိုကူညီပေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်လည်း ကူညီကြပါဦးလို့ပြောပါရစေ ကျွန်တော်တို့က သင်ခါစဆိုတော့ ဘာမှနားမလည်လို့ပါ ပြီးတော့ ပြည်တွင်းမှာပဲနေတာဆိုတော့ တစ်ချို့ဆိုက်တွေက မရဘူး ပြီးတော့ ကော်နတ်ရှင်က လည်း မကောင်းတော့ ဘာမှ အဆင်မပြေလို့ပါ ကျေးဇူးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မောင်လူလှ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, minthike, zo
Windows7Visual Style for XP
window xp ကို window7stlye နဲ့ သုံးချင်ရင် သုံးလို့ရအောင် software လေးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ psycho အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဒဿဂီရိ, သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, minthike, phoetharlay, zo
ပို့စ် 379 ခုအတွက် 2,382 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Windows7RTM Theme for Windows XP
ဒီ Theme လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့XP သုံးသော အကိုအမများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.......XP ကိုတင်ထားပြီးတော့ Window7စတိုင်လ်လေးနဲ့ သုံးချင်သောသူများအတွက်ပါ.......ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လိုက်ရှာသေးပါတယ်ခင်ဗျာ......မတွေ့ လို့ပို့ စ်အသစ်တင်လိုက်တာပါခင်ဗျာ........ရှိပြီးသားဖြစ်နေရင် တာဝန်ရှိသူများရွေ့ ပေးကြပါခင်ဗျာ.......
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဆန်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, minthike, phoetharlay, zo
Find More Posts by ဆန်းမောင်
18-07-2010, 04:54 PM
Themes 100 XP
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အသေသတ် xp ဆိုတဲ့ xp themes 100 ကိုယ်သွားရင်းလာရင်းတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အစ်ကိုကြီးမျိုးမင်းဇော် ဒီနေရာ မှာ Themes 100 windows7ကိုတင်ပေးထားဒါလည်းရှိပါတယ်... File size က
61.16 MB ပါ..
ဒီမှာဘဲတခါတည်း 2010 world cup theme for xp ကိုယ်ပေးလိုက်တော့မယ်ဗျာ...ပြီးလည်းပြီးသွားပါပြီ..
Logon XP 2010
world cup 2010 နှင့်ပတ်သက်သမျှအကုန်သိမ်းထားချင်ရင် ဒီ နေရာက World cup AIO ကိုယ်သွားယူပါ..
7 World cup theme လိုချင်ရင် ဒီ နေရာက နေရယူလိုက်ပါဗျာ..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခွန်ညီး, ဆန်းမောင်, မောင်သံသရာ, amaung344, minthike, zo
19-07-2010, 11:43 AM
[quote=ဖြိုးယံလေး;116778] World Of Warcraft Game Theme for Window XP
ဂိမ်းပုံစံကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အကို၊ အမတွေအတွက်ပါ။ Icon ပုံစံလေးတွေလည်းပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ မရှိသေးရင် စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့နော် ....
ကျနော် ဒီ theme လေးကို လိုခြင်လို့ပါခင်ဗျာ.....
file expire ဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ.......
Last edited by ကိုကိုသီဟ; 19-07-2010 at 11:47 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကိုကိုသီဟ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
19-07-2010, 01:10 PM
မှုလပိုဒ့်မှာ လင့်ပြင်ပေးထားလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ ..
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 19-07-2010 at 02:29 PM..
19-07-2010, 09:51 PM
ပြန်စာ - Themes 100 XP
Originally Posted by kyaukphyu
ကျွန်တော် ဒေါင်းပြီး အသုံပြုလို့မတတ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်... ဘယ်လိုသုံရမယ်ဆို ပြောပြပါဦး... ဒေါင်းလို့ရတဲ့ ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုကို ရမ်းလိုက်တာ.. အောက်ကပုံကို အဲရာတက်ပါတယ်... ပုံလေးတွေ သုံးချင်လို့ တတ်သိတဲ့ ကိုကို မမ များ သင်ပေးကြပါဦးလားဗျာ...
[SIGPIC][SIZE="5"][COLOR="Sienna"]ONLY HOPE GOAL IS MAIN.[/COLOR][/SIZE][/SIGPIC]
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ခွန်ညီး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
19-07-2010, 10:49 PM
ကို ခွန်ညီး လွဲနေလို့များလားဗျာ..ကျနော့်တင်ပေးတဲ့ကောင်လေးကိုယ် ဒေါင်းပြီးရင် ဇစ်ဖြုတ်လိုက်ပါ..
အဲဒီအထဲမှာ 70.themes.for.XP_tech24.vn / Windows XP 37 Themes_tech24.vn ဆိုပြီး Folder
နှစ်ခုတွေ့ရမှာပါ..ထပ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် အောက်ကပုံမှာလိုမျိုး ကြိုက်တဲ့ theme အမည်လေးတွေကိုယ်
အကိုပြထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြည့်ရဒါ Dll ပြသနာတခုပေါ်နေပြီနှင့်တူတယ်ဗျ... ဒီပို့စ်မှာ ကျနော်တင်ပေးထားတဲ့
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခွန်ညီး, မောင်သံသရာ, minthike, zo
ဟုတ်ကဲ့... ကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျ... ဟဲဟဲ.. အခုလေ... တင်လိုက်.. ပြန်ဖျက်လိုက်နဲ့.... ပြဿနာတက်နေတာ... C:/ >> Windows >> Resources >> Themes ထဲမှာဝင်ဖျက်ရင်းနဲ့ Window XP ရဲ့ နဂိုပါလာတဲ့ အော်ရီဂျင်နယ် Themes တွေများဖျက်မိတယ်ထင်တယ်.... မရှိတော့လို့... ဘယ်လိုများပြန်ရယူနိုင်မလဲဟင်... ကလိလွန်တာလေးကို ကူညီပါနော်... အဟဲ
22-07-2010, 09:57 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Apr 2009
Originally Posted by breezes
Steel Flash Theme For Windows 1.0
Theme လန်းလန်းလေးတွေကြိုက်တဲ့သူများ၊ ကွန်ပျူတာ Desktop ကို အမြဲတမ်း လန်းလန်းလေးတွေကြိုက်တဲ့သူများအတွက် Flash Theme များလာပါပြီခင်ဗျာ။
ifile ကနေ download မရလို့ ကူညီပေးပါဦး
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ aungaunghtun အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by aungaunghtun
တည်နေရာ: Network security world
ပို့စ် 16 ခုအတွက် 56 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Linux fedora ကို သဘောကျတဲ့ လူတွေနှစ်ခြိုက်လောက်တဲ့ Theme လေးတစ်ခုပါ။ တကယ်လှပါတယ်။ အနော်လည်း အဲ့ Theme လေးသုံးထားတယ် ဟီး လှတယ်နော်။ အနော့်ဟာက Window XP SP2 ပါ။ အဲ့မှာ Fedora theme ကိုထည့်သုံးထားတာ ဒီမှာကြည့်
NoThInG ShOuLd Be TrUsTeD UnTiL It TeStEd!
Last edited by coldy; 01-10-2010 at 10:01 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ coldy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, မြင့်မိုရ်, minthike, zo
တည်နေရာ: လှည်းတန်း ဗဟိ&
ပို့စ် 300 ခုအတွက် 1,626 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီTheme လေးက Ubuntu style Window XP အတွက် Theme ပါ
Last edited by kyawminkhoung; 08-05-2011 at 11:17 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, jsmith201012, ko myo, minthike, zo
Find More Posts by kyawminkhoung
ပို့စ် 51 ခုအတွက် 86 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်window xp theme လေးလိုချင်လို့ပါ ရှိရင်ပြောပြပေးပါလား ကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာကိုလှလှလေးဖြစ်ချင်လို့ desktop ပေါ်မှာငါးလေးသွားနေတာတို့ပါတို့ဘာရှိရင် ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ အောင်ဇင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by အောင်ဇင်
ပြန်စာ - window xp theme
>> ကွန်ပျုတာရဲ့Desktop ပေါ်မှာ နှင်းလေးတွေကျနေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ program လေးက ဒီမှာယူပါ DownLoad သုံးရတာ အခက်အခဲမဖြစ်အောင် အဲ့ program လေးကို ကျနော်ပြင်ရေးပေးထားပါတယ်။
>> ကွန်ပျုတာရဲ့ Desktop ပေါ်မှာ ပြေးနေမယ့် ငါးလေးတွေပါ။ ဒီမှာယူပါ DownLoad ငါးလေး နောက် တစ်ကောင် Download
>> Mouse airrow လေးသွားရာနောက်ကို တောင်ပံလေးခက်ပြီး ဖြေးဖြေးခြင်းလိုက်နေမယ့် ကာတွန်းပုံကောင်မလေးက
>> Desktop ပေါ်မှာ ဆော့ချင်တိုင်းဆော့နေမယ့် ကြောင်လေးတွေက ဒီမှာယူပါ Download
>> ကိုယ့်ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကားမပြောရဲရင် ဒီ program လေးပို့ပေးလိုက်ပါ သူကပြောပေးလိမ့်မယ် လိုချင်ရင်
အဲ့ကောင်မလေးဆီက အဖြေတောင်းတော့မယ်ဆို ဒဲ program လေးကို
ပို့ပေးလိုက်ရင်တော့ လက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေသေချာပေါက်ရမှာ။ သူဘယ်လိုမှ
ငြင်းလို့မရဘူး စိတ်ချ။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း စမ်းကြည့်ဦး ရယ်ရတယ် လိုချင်ရင် ဒီမှာယူပါ Download
Program လေးတွေကို ပုံနဲ့သေချာရှင်းမပြတာက site လေးမှာဆိုးလို့ပါ။ နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စနိုးလေး, bagothar85, g00gle, Lwin Thu, minthike, zo
အကိုရေကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်သွားပြီး တကယ်ကျေးဇူတင်တယ် အကိုပို့ထားတာကျွန်တောမတွေ့မိလို့ ခုမှဘဲတွေ့တော့တယ် ကျေးဇူဘဲ အကို
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ အောင်ဇင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 253 ခုအတွက် 1,209 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မြန်မာပြည် မန္တလေးကနေ ကျုပ်ဒေါင်းကြည့်တာအဆင်မပြေပါဘူး
အဲဒီဆိုက်ကတင်ထားတဲ့ အလုပ်မလုပ်သောလင့်များကို အလုပ်လုပ်ပေးသော
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မောင်သံသရာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မောင်သံသရာ
Microsoft Window XP ကို အစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ် Ye Naung Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော 49 01-10-2010 06:23 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 09:18 AM